Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo dib ugu laabtay Kismaayo, kadib safar uu ku tegay Nairobi | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo dib ugu laabtay Kismaayo,...
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan oo dib ugu laabtay Kismaayo, kadib safar uu ku tegay Nairobi
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan uu dib ugu laabtay magaalad Kismaayo, kadib safar uu ku tegay Nairobi.
Sayid Aadan Saxaafada la hadlay Markii uu ku laabtay Kismaayo, waxa uuna ka hadlay bis mari-waaga ka taagan arrimaha doorashooyinka ee 2021-ka, wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in xal loo raadiyo caqabadaha iyo culeyska siyaasadeed ee hortaagan qabsoomida doorashooyinka.
doorashada ee 2021-ka, abaaaraha iyo ammaanka dalka.
Previous articleDaahir Maxamed Geelle oo ka hadlay xaalada dalka iyo Doorashada..
Next articleMaxkameynta iyo Dacwadii askarigii Dilay George Floyd. Derek Chauvin, oo la qaadi doono saacadaha soo socda.
Sacuudiga oo Noqday Dalkii ugu horeeyay ee ka Hadla Colaada Muqdisho...